WhatsApp Web izao dia mifanaraka amin'ny Opera sy Firefox | Androidsis
WhatsApp Web dia mifanaraka amin'ny mpizaha tranonkala hafa ankehitriny
Iray amin'ireo zavatra nandrasana indrindra hampidirina ny fampiharana ny fandefasana hafatra sy ny mpitarika tsy voadinika amin'ny fisintomana ao amin'ny Play Store, WhatsApp, Ankoatra ny ilay fampanantenan'ny feo amin'ny Internet nampanantenaina izay tsy tonga akory. Tsy isalasalana fa ny fampiasa ho an'ny mifandraisa amin'ny kaonty WhatsApp anao avy amin'ny fampiononana atolotry ny solosainay manokana.
Ho an'ity, nantsoina ny kinova WhatsApp an'ny tranonkala WhatsApp Web ary izay azo nidirana, tamin'ny voalohany, tamin'ny alàlan'ny Chrome ihany, ny google web browser. Eny ary, soa ihany fa tsy izany intsony ny raharaha satria efa nanao fanaintainana ny mpanamboatra WhatsApp Fifanarahana an-tserasera WhatsApp miaraka amin'ireo mpitety tranonkala maro kokoa, manokana roa amin'ireo malaza sy fantatry ny rehetra rehetra. Ka izao ny WhatsApp Web izao dia manolotra fanohanan'ny teratany Firefox, ny mpizaha tranonkala an'ny Mozilla ary ilay fitetezana malaza sy haingana Opera.
Fantatrao izao, raha tsy mpampiasa ianao Google Chrome ary noterena ianao hisintona azy io mba hahafahanao miaina ny fanandramana mifehy ny kaonty WhatsApp anao amin'ny alàlan'ny fampiononana atolotry ny kinova desktop, WhatsApp Web,. Fantaro fa tsy fepetra ilaina intsony izao afaka mifandray amin'ny WhatsApp Web amin'ny alàlan'ny Firefox na Opera ianao izao.
Mifanohitra amin'izany no izy, raha mpampiasa Google Chrome mahazatra ianao ary te hiaina ny zavatra niainanao WhatsApp Web avy amin'ny Firefox na OperaIreto ny rohy fampidinana an'ireo mpitety tranonkala telo izay amin'izao fotoana izao dia mifanaraka amin'ny WhatsApp Web, ny kinova desktop an'ny fampiharana WhatsApp malaza.
Manararaotra an'ity fampiasa WhatsApp Web vaovao ity izay mifanaraka amin'ny tranokala vaovao, te hanana fahalalahana hanontany anao izahay: Inona ny tranokala amin'ny birao tianao?.
Misintona - Firefox, Opera, Google Chrome
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp » WhatsApp Web dia mifanaraka amin'ny mpizaha tranonkala hafa ankehitriny
Ahoana ny fahitana ny hetsika fampisehoana an'ny Samsung Galaxy S6 "Galaxy Unpacked 2015"